Ixabiso eliphantsi lomatshini wokupholisa umatshini wokupholisa kunye neFektri | YiZheng
Yintoni i-Counter Flow Flow Machine?
Isizukulwana esitsha Counter Flow Umatshini okupholisa uphando kunye nokuphuhliswa yinkampani yethu, iqondo lobushushu emva kokupholisa alikho ngaphezulu kweqondo lobushushu kwigumbi 5 ℃, izinga lemvula alikho ngaphantsi kwe-3.8%, kwimveliso yeepellets ezikumgangatho ophezulu, ukwandisa ixesha lokugcina iipellets kunye nokuphucula Izibonelelo zoqoqosho zidlale indima ebalulekileyo. Yimodeli esetyenziswa ngokubanzi kumazwe aphesheya kwaye yindawo etshintshayo yokupholisa izixhobo zesiko.
Umgaqo wokuSebenza woMatshini wokuPhola waManzi wokuPhumela
Xa amasuntswana avela kumatshini wokomisa edlula Counter Flow Umatshini okupholisa, badibana nomoya ojikelezileyo. Ngethuba nje i-atmospheric igcwele, iya kususa amanzi ebusweni beengqungquthela. Amanzi angaphakathi kwamasuntswana ashukunyiselwa kumphezulu ngokusebenzisa ii-capillaries zezichumiso zesichumisi emva koko zithathwa ngumphunga, ke ezo granules zichumileyo zipholile. Kwangaxeshanye, ubushushu obufunxwe ngumoya, ophucula umthamo wokuhambisa amanzi. Umoya uyaqhubeka ukhutshwa yifeni ukususa ubushushu kunye nokufuma kwegranules yesichumiso kwindawo epholileyo.
Ukusetyenziswa koMatshini oPholisa uMbane wokuPhola
Ubukhulu becala zisetyenziselwa ukupholisa izinto ezinobushushu obuphezulu emva kwegranulation. Lo matshini unendlela eyodwa yokupholisa. Umoya wokupholisa kunye nobushushu obuphezulu kunye nokufuma okuphezulu izinto zihamba kwelinye icala, ukuze izinto zipholile ngokuthe ngcembe ukusuka phezulu ukuya ezantsi, kuthintela ukuqhekeka komphezulu wezinto ezibangelwa kukupholisa ngokuthe nkqo ngokubanzi ngenxa yokupholisa ngequbuliso.
Izinto eziluncedo zeCounter Flow Umatshini opholisayo
Inkqubo ye- Counter Flow Umatshini okupholisa inefuthe elihle lokupholisa, iqondo eliphezulu lokuzenzekelayo, ingxolo ephantsi, ukusebenza ngokulula, kunye nolondolozo olusezantsi. Yimodeli esetyenziswa ngokubanzi phesheya kwaye sisixhobo esiphambili sokubuyisela endaweni okupholisa.
Ubushushu bamaqhekeza apholileyo abukho ngaphezulu kwe +3 higher ~ +5 ℃ yegumbi lobushushu; imvula = 3.5%;
】 2, inomsebenzi owahlukileyo wokukhutshwa kwepelethi ngokuzenzekelayo xa ucima;
Ukupholisa okungafaniyo kunye neqondo eliphantsi lokutyumza;
Ulwakhiwo olulula, iindleko zokusebenza eziphantsi kunye nendawo yokuhlala encinci;
Ikhawuntari yokuHamba kokuPholisa umatshini weVidiyo
Ikhawuntari yokuHamba kokuPhola kweModeli yoKhetho
Ukupholisa umthamo (m)
Egqithileyo Isitshisi samalahle esityunjiweyo
Okulandelayo: Rotary Igubu Sieving Machine
Intshayelelo Loluphi uhlobo olutsha lwe-Organic & Compound Fertilizer Granulator? Uhlobo olutsha lwe-Organic kunye ne-Compound Fertilizer Granulator sisixhobo se-granulation esisetyenziswa kakhulu kwimveliso yezichumisi ezihlanganisiweyo, izichumisi zezinto eziphilayo, izichumiso zebhayoloji, izichumisi ezikhutshwayo ezilawulwayo, njl.
Intshayelelo Yintoni na nkqo Chain isichumiso isityumzi Machine? Nkqo Chain isichumiso isityumzi yenye izixhobo ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo yokutyumza kwishishini compound isichumiso. Inokulungelelaniswa okunamandla kwezinto ezinomxholo ophezulu wamanzi kwaye inokutya ngokutyibilikayo ngaphandle kokuthintela. Izinto zingena ukusuka f ...